पर्यटन, यातायात र एयरलाइन्सलाई लकडाउनले ठूलो असर पारेको छ - Wnepal.com
ज्योति विकास बैंक मात्रै खुलेका छ । कि कारोबार पनि भइरहेको छ । बैंकका कर्मचारीहरुको कस्तो सुरक्षा विधि अपनाइएको छ । २ प्रतिशत ब्याज छुटको असर यी र यसै विषयमा केही दिन अगाडी ज्योति विकास बैंक लिमिटेडमा का.मू. सीइओमा नियुक्त भएका का.मु. सीइओ पारसराज कडेलसंग भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः–